Technical Skills & Employability/Soft Skills Part (2) ﻿
Technical Skills & Employability/Soft Skills Part (2)
Tags: hard skills-technical skills-soft skills
အပိုင်း (၂) မှာတော့ Ooredoo Myanmar မှ Organiation Development Director Ms Valentina မှ Initiative Skill ကို ဘယ်လိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကို ဥပမာပေးပြီး ရှင်းပြထားပါတယ်။
၁.Soft Skill ကတော့ Empowerment လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် ကို ပြောပြထားပြီး မိမိအထက်လူကြီးကို ဘယ်လို Approach လုပ်နည်းနှင့်
၂.နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ Manager နဲ့ ဝန်ထမ်းကြားမှာလည်း ရှိနေတဲ့ Expectation နဲ့ ပက်သက်သော Gap အကြောင်းကိုလဲ ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။
အသေးစိတ်ကိုတော့ Audio မှာ အသေးစိတ်နားဆင်ပေးပါ။
အခုလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ Topic ကို sharing လုပ်ပေးသွားသည့်အတွက် JobsInYangon.Com မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Translator -Female -Chinese language (4 Skills) -Graduate UniversityMYANMAR YANG DING is Taiwanese LED manufacturing below at PARA LIGHT Group Our HQ at Taipei, Taiwan. The Myanmar factory i...
Under the leadership of the proprietor U Soe Myint and the assistance of the expertise knowledge of the technicians, the company works for the welfare of the local farmers and peasants.The aim of the ...